Nezvedu - Omita Lightig
Omita Lightig neRegistered yakawanikwa makumi maviri emamiriyoni RMB akawanikwa muna2009.
Semugadziri akasarudzika, mugadziri uye mutengesi wemagetsi ekushongedza uye Edison mababu, zvigadzirwa zvedu nebasa zvanga zvichitendera nemutengi pasirese.
Tine mafekitori maviri ari kuDongguan Guta rine 6000M2 Fekitori yemusangano, 2000M2 imba yekuchengetera uye 400M2 Showroom. Isu tinewo timu yehunyanzvi kubva pakugadzira, kugadzira uye QC kutonga, uye Kushambadzira uye timu yekutengesa.
Zvezvirongedzo zvemwenje, isu tiri kutarisisa pane tsika yekushongedza vaeni mwenje, kugadzira kwehotera, nzvimbo yekudyira, bhawa, Mall uye zvimwe zvivakwa zvepamusoro. yekristaro pendant chandelier, pendant mwenje, pasi mwenje, tafura mwenje uye madziro sconces eakasiyana emukati nekunze kunyorera.
ZveMwenje mababu, isu tiri zvachose vatungamiriri vanogadzira ekushongedza akazara girazi Edison mababu, asingaverengeke nyowani nyowani mamodheru emhando dzakasiyana dzekutengesa, mutengo unonzwisisika webhizinesi riri nani kukura.Zviri nyore kwazvo kune mumwe wedu kuita purofiti nezvakakosha zvigadzirwa zvedu . Kunyangwe kana kugadzirwa kwedu kwegirobhu kwakakura kwazvo, tanga tichichengetedza yakasimba kudzora mhando, uye kusangana nezvinodiwa nevatengi nekuchinjika.
Nezve tambo kuvhenekera, icho chinowanikwa chekushandisa uye mitsara yekugadzira kusimbisa iwo mababu ari kutengesa. Tine jekiseni Kuumbwa muchina wePc kufukidza kugadzirwa. Isu zvakare tine sting tambo yekugadzira tambo mune yedu fekitori.
Zvigadzirwa zvedu uye sevhisi zvave kuwedzera kune nyika dzinopfuura makumi maviri neshanu, Europea neU.SA seMusika Mukuru, zvisinei isu zvakare tine bhizinesi mune idzo dzinomhanyisa nyika dzichiri kusimukira dzinosanganisira Brazil, Chile neSouth Africa, Nigeria, Malaysia.
Mazhinji ezvigadzirwa zvedu ndeyeEC ​​Rohs akasimbiswa, uye zvirokwazvo zvakare ane UL neSAA.
Kuteerera zano rakasiyana kubva kune vatengi vepasirese, kuchinyungudutsa akasiyana maindasitiri epasirese, kutora kwekupedzisira tekinoroji sezvinobvira, asi usambo shandura pfungwa yedu yekutanga -Kushingairira kwezvinhu zvakagadzirwa zvakanaka uye zvigadzirwa zvinokwanisika kune rakakura bracket yeruzhinji.
Ramba uchienda neChiedza ndicho chete chinhu chatinoita.
Iye Gesi Kuchaja